ဥာဏ်စမ်း ပဟေဠိ | အိမ့်မှူးသော်
လရိပ်အိမ် 7:47 AM
အိမ့်မှူးသော် 12:02 PM
၁။ သာသမီး ရတနာ
phyo soe 9:19 PM
your post is simply excellent and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanksamillion and please keep up the enjoyable work.
Here is my website - www.Massagechair-Reviews.org
sub kot lup kot 6:08 AM
စကားလုံးက ၅လုံး ကြာသပတေးနာမ်နဲ့စပီး ကြာသာပတေးနာမ်နဲ့ဆုံးတယ် ပီးတော့ အငြင်းစကားလုံး နောက်ကဖတ်ဖတ် ရှေ့ကဖတ်ဖတ် အဓိပါယ်က တူတယ်တဲ့ သိတဲ့friများ ပြောပြပေးကြပါဗျာ ကျွန်တော် အခက်တွေ့နေလို့ပါ
sub kot lup kot 6:53 AM
သိတဲ့friများ အဖြေလေး ပြောပေးကြပါဗျာ